Dzidziso yecoronavirus | Kwayedza
20 Mar, 2020 - 00:03	 2020-03-19T17:23:58+00:00 2020-03-20T00:03:36+00:00 0 Views
Coronavirus inogona kudzivirirwa kuburikidza nekuchengetedza hutsanana
Coronavirus inokwanisa kuparadzirwa nekukosora, kuhotsira, kukwazisana kana kubata mhuka nokudaro chengetedzai utsanana.
Deredza mikana yekutapurirwa Covid-19 nekuregedza kushanya kunzvimbo dzine chirwere ichi.
Taurira vekuzvipatara zviri pedyo kana muine ruzivo maringe nevanhu vakamboenda kuChina nedzimwe nyika dzine utachiona uhwu kana vachiita zviratidzo zvakaita sekukosora.
Gezai mawoko enyu nesipo nemvura inomhanya kana muchipepa varwere, mushure mekushanyira zvimbuzi, uye musati mabata chikafu.
Chirwere checoronavirus chakatanga kuonekwa kuChina munaZvita 2019 chikabva chazopararira kudzimwe nyika.
1. Mune nyaya dzeCoronavirus here muZimbabwe?
Kusvika nhasi uno, hakusati kwava nemunhu ati abatwa kuti ane coronavirus muZimbabwe. Zvisinei, tinofanira kuramba takangwarira chirwere ichi.
2. Chii chinonzi Novel Coronavirus?
Coronavirus imhuri yakakura yeutachiona hunokonzera kurwara kunosanganisira kupindwa nechando nekuzarirwa (Middle Eastern Respiratory Sydrome kuenda kuSevere Acute Respiratory Sydrome). Chirwere cherudzi urwu change chisingawanze kuwanikwa muvanhu.
3. Ndingaita fungidziro yekuti ndine Vovid-19 kana zvichinge zvaita sei?
Kupindwa nechando, kurwadziwa muchipfuva, kutemwa nemusoro, maronda pahuro, kuparara kweitsvo, kukosora uye kunetseka pakufema.
Chirwere ichi chinonzi chakatanga kuonekwa kuHubei Province, muWuhan City, kuChina.
4. Coronavirus inoparadzirwa sei?
Chinopararira zvisina tsarukano chichifamba nemumhepo kuburikidza nekukosora kana kuhotsira.
Kukwazisana kana kuenda pedyo nemunhu anacho unogona kutapurirwa.
Kubata nhengo dzemuviri dzine utachiona semaziso, mawoko nemuromo
Patsvina yevanhu, hapana umboo
5. Ndingaderedza sei mikana yekutapurirwa Covid-19?
Usaenda padyo nemunhu ane zviratidzo zvechikosoro
Usabata mhuka dzemusango
Kana uchikosora, vhara muromo wako negokora kana tishu
Geza mawoko ako zvakasimba nesipo nemvura
Mushure mekukosora kana kuhotsira
Mushure mekupepa murwere
Usati wadya kana kugadzira chikafu
Mushure mekushanyira chimbuzi
Mushure mekubata mhuka kana tsvina yemhuka
Kana uchinge uine zviratidzo zvakadai sekukosora, kupindwa nechando, kunetseka pakufema, tsvaga rubatsiro rwekurapwa nenguva uchiudzawo chiremba nhoroondo yekwawakashanya.
6. Ndezvipi zvimwe zviri kupihwa seyambiro nebazi rezveutano?
Vanhu ngavaregedze kufambisa mashoko emanyepo paWhatsApp kana dandemutande maringe neCovid-19 zvinokonzera kusagadzikana mune veveruzhinji
Vanhu vabatsire mukutsvaga mashoko maringe nezvinodiwa vachishanda pamwe nemachiremba
Tsvagai ruzivo rwechokwadi kubva kumachiremba ari pedyo nemi
Mhan’arai nyaya dzose dziri maringe neCovid-19 pazvipatara zviri pedyo
7. Zvii zviri kuitwa nebazi rezveutano kudzivirira Covid-19?
Vaenzi vose vari kubva kune dzimwe nyika vari kuvhenekwa chirwere ichi kumiganhu yenyika
Vaenzi vose vari kubva kunyika dzine chirwere ichi vari kuitwa tevedzo nevarapi vakafundira basa kwemazuva 14 vachiongororwa utano hwavo
Kune nzvimbo dzekuchengetera vanhu vanenge vari kufungirwa kuti vane Covid-19
Zvekushandisa zviri kuunganidzwa
Varapi vakakosha sezvo muzvipatara muri imo munosvikira varwere saka kune nzvimbo dzakasarudzwa kuti dzinge dzichitarisa nezvechirwere ichi.